कोटेश्वर–कलंकी सडकमा कुन समयको यात्रा छ जोखिमपूर्ण ? « Postpati – News For All
कोटेश्वर–कलंकी सडकमा कुन समयको यात्रा छ जोखिमपूर्ण ?
फागुन २, काठमाडौं । फराकिलो, स्तरीय र सुन्दर! कुनै विकसित देशको भन्दा कम राम्रो देखिँदैन । हो, यो चक्रपथको कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्मको सडकको बयान हो। त्यसको दृश्य यस्तै मनमोहक देखिन्छ।
अझ नेपालमै पहिलोपटक बनेको भनिएको कलंकीको अन्डरपासले ध्यान तानिरहेकै छ। तर यस्तो सुन्दर देखिने फराकिलो र स्तरीय सडकभित्र जोखिमको कहर भने लुक्न सकेको छैन।
चीन सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको यस सडक खण्डमा सुरक्षाका लागि चाहिने आधारभूत वस्तुहरू जेब्राक्रस रेखा, डिभाइडर, आकासे पुल, ट्राफिक संकेत, ट्राफिक लाइट, फुटपाथ आदि नबन्दा जोखिम बढेको बढै छ। यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा सुरेश तामाङले लेखेका छन् ।
छ वटाभन्दा बढी मुख्य चोक रहेको यस सडक खण्डको कोटेश्वर, बीएन्डबी र धोबीघाटमा चीनले आकाशे पुल बनाइदिएको हो। यातायात विज्ञ आशीष गजुरेलले उक्त सडक खण्ड पैदलयात्री मैत्री नभएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘त्यहाँ सुरक्षित क्रसिङको व्यवस्था नभएकाले त्यसलाई सुरक्षित भन्न सकिँदैन। किनकि सडक खुला र फराकिलो भए पनि क्रसिङ र जेब्राक्रसिङ उपयुक्त नभएकाले धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सांघाई ग्रुपले विस्तार गरेको १० किमि भएको यस सडकमा दिउँसोभन्दा साँझ र बेलुका यात्रा गर्न जोखिम बढेको पाइएको छ। सडक छेउमा बत्ती नहुँदा रातको समयमा सवारी चालकदेखि पैदलयात्री जोखिममा परेका छन्।
गएको वर्षको माघमा सरकारलाई हस्तान्तरण भएको उक्त सडक खण्ड चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेर सन् २०१३ मा चिनियाँ ठेकेदारले विस्तार थालेको थियो। सडक सुरक्षाको विषयमा व्यापक कुरा उठेपछि सडक विभागले अध्ययन गर्न एक समिति बनाएको थियो। समिति गठन भएको एक वर्ष बिते पनि हालसम्म सडकको सुरक्षामा सुधार आएको देखिँदैन।
तर, सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्माले सडक सुरक्षामा ध्यान दिँदै चक्रपथमा कामहरू गरिरहेको दाबी गर्नुभयो। ग्वार्काे, सातदोबाटो, एकान्तकुना, महालक्ष्मीस्थान, बल्खु, सानेपामा आकाशे थप पुल बनेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘जेब्राक्रसको रेखा बनाउनेलगायत सडक सुरक्षामा ध्यान दिएका छौँ। त्यहीअनुसार काम भइरहेको छ।’
यद्यपि, ग्वार्काे, सातदोबाटो, एकान्तकुनाबाहेक अन्य स्थानमा अझै आकाशे पुल निर्माण हुन सकेको छैन। सडकको मुख्य लेन छुट्याउन सडकका बीचमा कोरिएको रेखासमेत मेटिइसकेको छ भने धेरै स्थानको जेब्राक्रसको रेखा खुइलिइसकेको छ।
काठमाडौं चक्रपथ सडक सुधार योजनाका इन्जिनियर सुप्रिम चुडालले सडक सुरक्षालाई ध्यान दिँदै सडक पेन्टिङ, जेब्राक्रसिङ, रेलिङ निर्माणका कामहरू भइरहेको बताउँदै सडकमा बत्ती कसले राख्ने भन्ने विषयमा अन्योल नै रहेको जानकारी दिनुभयो।
‘हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन। केही काम डिभिजन सडकबाट भइरहेको छ। जोखिम भएको देखिए पनि हामीले बजेट नभएर काम गर्न नसकिएको हो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सडक बत्ती राख्न निर्देशन आए पनि हालसम्म हुन सकेको छैन।’